Fandaharana amin’ny fahitalavitra : hiara-kiasa amin’ny “Kopi kole” ny TV Plus sy ny Sodiat | NewsMada
Fandaharana amin’ny fahitalavitra : hiara-kiasa amin’ny “Kopi kole” ny TV Plus sy ny Sodiat
Ho vary sy rano manomboka eto. “Namaly ny antsonay tamin’ny volana desambra ny Vondrona orinasa Sodiat, hanohana ny TV Plus amin’ny fandaharana Kopi kolé andiany fahefatra amin’ity taona ity. Mbola ho avy ny sasany fa namaly izany voalohany aloha izy ireo”, hoy ny filoha tale jeneralin’ny fahitalavitra TV Plus , omaly tetsy Antanimena. Natao tamin’io fotoana io ny fifanaovan-tsonia eo amin’ny roa tonta ho fiaraha-miombona antoka amin’izany fandaharan’ny fahitalavitra anisan’ny be mpanaraka izany.
“Namaly ny antso izahay amin’ny maha orinasa malagasy ny TV Plus. Ilaina ny fifanohanana ka naneho ny fahavononana ny hifanome tanana izahay”, hoy kosa ny teny fohy nataon’ny filoha tale jeneralin’ny Vondrona orinasa Sodiat, Ravatomanga Mamy. Hiseho amin’ny fifanohanana ara-bola sy fifanakalozana eo amin’ny roa tonta izany fiaraha-miasa izany.
Tsiahivina fa hiparitaka any amin’ny faritany enina, miampy ny any Mananjary sy Antsirabe ny fifaninanana “Kopi kole”. Hiavaka kosa, anefa izany amin’ity andiany manaraka ity. “Hahazo loka lehibe koa ireo mpanakanto mpandresy halaina tahaka amin’ny Kopi kole. Ho eo hatrany kosa ny Sodiat amin’ny fanohanana ny fifaninanana”, hoy ny eo anivon’ny TV Plus.